संसदमा ‘मेरो सरकार’ : दुईतिहाइको दम्भमा विवेक गुमाउँदा राजतन्त्रको भद्दा नक्कल ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली प्रकाशित : शनिबार, बैशाख २१, २०७६
काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘मेरो सरकार’ सम्बोधन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली जनताले कुनै एक व्यक्तिको नभई नागरिकको सरकारमा विश्वास गर्दछ । त्यसकारण नै हिजोको एकतन्त्रीय राजतन्त्र र राणाको शासन गर्ल्याम्म पारेका हुन् ।
करिब दुई महिनाअघि सेना दिवसका अवसरमा काठमाण्डूको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ गराउन भन्दै ट्राफिकले सवारी साधनहरू रोकिराखेको थियो। त्यसको विरोध गर्दै केही व्यक्तिहरूले निजी सवारी साधन अघि बढाएर त्यसलाई अवज्ञा गरे।
नागरिकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरी अवज्ञा गरेको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्यो। उक्त भिडियो ‘भाइरल’ भएको केही दिनपछि राष्ट्रसंघीय महिला नियोगको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाँदा भने पहिले जस्तो लामो समयसम्म सडकमा जाम गराइएन।
उक्त निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनामा भएको र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको स्थानमा उनका लागि हेलिप्याड बनाइने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भयो। गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत ‘राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको’ भनेर आलोचनाको केन्द्रमा परिन् ।
हेलिप्याड प्रकरणसँगै राष्ट्रपतिका लागि महँगा गाडीहरू किन्न लागिएको विषयले पनि उनलाई विवादमा तानेको थियो। सरकारले सेनामार्फत् त्यस्ता ‘विलासी’ गाडीहरू किन्न लागेको भन्दै धेरैले त्यसको आलोचना गरेका थिए। ती गाडीहरू खरिदका लागि १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
केही कूटनीतिज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रतिक्रिया दिएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन्।